I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Mashi 10, 2018
I-LB inikeza iNdaba Ephelele yoMdlali webhola lomhlalaphansi owaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Ubhedu obomvu". Indaba yethu ye-Djibril Cisse Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namanye amaqiniso ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokubukeka kwakhe ngokomzimba kanye nomsebenzi we-post-retratirement kodwa abambalwa bacabanga ukuthi i-Bio yethu ye-Djibril Cisse iyathandeka kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Isiqalo sokuphila
I-Djibril Cisse yazalwa ngosuku lwe-12th ka-Agasti 1981 e-Arles, eFrance. Wazalelwa kunina, uKaridiata Cissé nobaba, uMangué Cissé. Bobabili bangabazali base-Ivory. U-Djibril wayengowesishiyagalombili nomntwana wokugcina womndeni wakhe. Uqale ukugijima ibhola ngokushesha nje lapho ehamba ngokubonga uyise nowayeyena owayengumdlali webhola lezinyawo, owamlungisa ukuba afane nebhola njengemidlalo yakhe eyodwa kuphela.
Ngonyaka we-1989, ngenkathi eseminyaka engu-7, u-Young Djibril wasayina isivumelwano se-schoolboy neqembu lakhe lebhola lezinyawo, u-AC Arles owavuselela yonke iminyaka engu-1-2 njengoba wenza intuthuko enkulu futhi wakhulela isikhundla sakhe sebhola lebhola.
Ngemuva kweminyaka eyisikhombisa e-club futhi ngenhloso yokuthola okuhlangenwe nakho okungcono, u-Cisse uguqule phakathi kwezinhlelo ezahlukene zezinhlelo zentsha yeqembu. Ekugcineni wagcinwa eqenjini lokuqala le-Auxerre club yentsha ye-1998. Ngemuva kokudlala i-Auxerre ngezinkathi eziyisithupha, ebhala imigomo ye-90 ekubukeni kwe-166, wathuthela ku-Premier League club Liverpool ku-2004. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Ubudlelwano
U-Djibril Cisse ubelokhu ehlose ukuphola ngokobulili ngenxa yezinwele zakhe ezimhlophe ezaba yingqungquthela yamantombazane amhlophe ayezungeza njengo-sharks. Ngemuva kokuba umdlali weLiverpool, abantu babengazi ukuthi kwakuyisikhathi esithile ngaphambi kokuba athole isikhumba.
Ngemva kwamasonto ambalwa ngemuva kokujoyina iLiverpool, i-Djibril Cisse yaqala ubuhlobo obunzima nomuntu owayengumgcini wezinwele, uJude Littler, ovela futhi wakhulela e-Anglesey, isiqhingi saseWales.
Ngo-18 Juni 2005, Djibril Cissé washada noJude Littler. Umshado wenziwa eBodelwyddan Castle, nezivakashi eziphawulekayo kuhlanganise UShaun Wright-Phillips kanye nabadlali beqembu lesizwe laseFrance Louis Saha no-Sylvain Wiltord. Ngaphezu kwalokho, iqembu lalinamakhelwane we-200, kufaka phakathi igama elikhulu kakhulu lomhlaba ngesikhathi esifanayo Steven Gerrard, Zinedine Zidane futhi Thierry Henry.
Ukubukeka kwe-Cissé yokugqoka kwakubonakala kuyingqayizivele futhi kuyamjabulisa ngempela wonke fan weLiverpool. Washada e-tuxedo ebomvu iLiverpool konke ngenxa yomkakhe nomdlali weLiverpool abaqinisekisile ukuthi wayegqoka umbala weqembu lakhe.
Kwacatshangwa ukuthi uMillionaire Cisse wayenomshado we-£ 100,000 we-fairytale eBodelwyddan Castle e-2005 ngaphambi kokuthuthela endlini yase-Cheshire.
Ngaphambi komshado wabo, lo mbhangqwana wawunezingane ezintathu okungukuthi; UCassius, uNkosana uKobe noMarley Jackson. Ngaphezu kwalokho, u-Cissé unendodakazi, u-Ilona, ​​ebuhlotsheni obudlule.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -I-Divorce
Lo mbhangqwana wahlukanisa u-Okthoba 2014 ngemuva kweminyaka engu-7 yomshado ngenxa yokungathembeki. Ukusebenzisana kwabo kanye nemali yomyeni wakhe kwahlukana kahle. Ngokweqile futhi ngaphandle koCisse ukwazi, uJude Littler owayengumkakhe wangaphambili wabonisa ukuthi uhlukanisile neqembu futhi a ikhekhe lesahlukaniso okukhombisa umkhwenyana owehlisiwe.
Waze waqhubeka nokuthatha izingane zakhe kwi-BBC5 Show ukukhuluma ngesifo sakhe senhliziyo phezu kwesahlukaniso, ethi ushiye "Ubuhlungu obungasoze buya". Ngesikhathi ukubonakala kukaJude kulo mdlalo kwaholela ekusekelweni kwezindaba zomphakathi kubantu abazomdumisa, naye wavela emlilweni evela kubasebenzisi be-Twitter ababesolwa nabo bobabili nabesifazane kulo mdlalo njengokwenza isenzo "Ukumba ngegolide".
Lapho ezwa mayelana nombukiso, uCisse waqala ukuthukuthela uJuda on Twitter futhi uthe uthukuthele ukuthi uvumele izingane zabo ezintathu ukuba zifakwe kwi-TV ebukhoma ngesikhathi zixoxa ngomshado wakhe.
U-Djibril Cisse uphinde waphendula ngezikhala ezintathu ezihlukene. Uthe: "OMG, uyahamba ukhalela ukuthi awunayo imali eyanele yokukhulisa izingane futhi uhamba uhamba ngezimoto f ... I-Joke ura disgr ​​* ce." Ungakhathazeki ngizokutshela ohlangothini lwami. Ufuna abantu abagcwele njengalokhu kuphezulu * njll ... "Ukubonisa izingane kwi tv kazwelonke ukuthi ihlaya. Lokhu kunguku ... .. Ukuhlazeka. Ngeke ngamukele lokhu c ***. "
Ngemuva kokungqubuzana okuningi komshado, bobabili amaqembu ashukunyiswa kahle. Kamuva uCisse wabe isithombe esimbonisa ngothando olusha Marie-Cecile Lenzini, ukubhala: "Emva kweminyaka engu-4, ulokhu ukhuluma ngami? Thola ukuphila, yenza sengathi ngithola uthando. "
Nakulokhu, uMarie-Cecile Lenzini njengomlingani wakhe wangaphambili waba ngumthandi futhi wazuza izintshevu ze-blonde.
Ngenkathi uCisse eqhubeka, waqinisekisa ukuthi izingane zakhe zithola okuhle kakhulu kuye namuhla. Namuhla, uCassius Cisse, ingane yokuqala, nendodana kaDiibib Cisse ulandela izinyathelo zikayise. Okwamanje usayine ne-League One.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Komndeni
UCissé wazalelwa abazali base-Ivorian eFrance abanezizinda ezicebile zomndeni. Amalungu amaningi omndeni wakhe kuhlanganise noJibril Cisse aguqulwa eRoma Katolika evela e-Islam.
UTABA: UMangué uCissé Djibrila wayengumdlali webhola lezinyawo lase-Ivory Coast owadlala njengomdlali ovikela. Ku-1970 wafinyelela ekupheleni komdlalo we-Africa Cup of Nations. Ushone ngo-30 September 2009 ngemuva kwesifo eside. Ngezansi isithombe sika Djibril Cisse noyise.
Ubaba wakhe oselekhulile uMangué Cissé (ovezwe ngenhla) wayengumdlali webhola lezinyawo futhi ubeke izwe lakhe ngaphambi kokuba abazali bakhe bathuthele eFrance e-1974. Kuningi engaziwa ngoMama kaDiibril Cisse, uKaridiata Cissé ngaphandle kokuthi ungumama wesikhathi esigcwele.
SIBLINGS: Abafowabo bakaJibril Cisse bahlanganisa; UNma Cisse (udade), uSeni Cisse (umfowabo), uDamaye Cisse (udade), uHamed Cisse (umfowabo), uFode Cisse (umfowabo) no-Aboubacar Cisse (umfowabo).
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Personal
I-Djibril Cisse unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla ka Djibril Cisse: Uhlakaniphile, unomvalo omhlophe onomunwe, onomusa, onenhliziyo efudumele, ejabule, ehlekisayo
Ubuthakathaka bukaJibibril Cisse: Wayengaba nomkhukhumezi, enenkani, engapheliyo.
Yini Djibril Cisse ayithandayo: Indawo yaseshashalazini, ukuthatha amaholide, ukuthenga izinto ezibizayo nokuzijabulisa nabangani.
Yini Djibril Cisse engathandi: Ukunganakiwe, ebhekene neqiniso eliyinkimbinkimbi, ukungabi nokuphathwa njengenkosi.
Ngamafuphi, i-Djibril Cisse iyinhle, idala, iyaziqhenya, inkulu futhi inzima kakhulu ukumelana nayo. Uyakwazi nokufinyelela noma yini ayifunayo kunoma iyiphi indawo yokuphila abazinikele kuyo.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Ama-Tattoo Facts
Abasebenzisi abaningi be-intanethi baseshe leli gama; Djibril Cisse tattoo kanye nencazelo yabo. Iqiniso liwukuthi; Umzimba ka-Djibril Cisse ugcwele izidakamizwa. Unezinto ezingaphezu kwe-40 yobuciko obuhlobisa isikhumba sakhe ngemiklamo yezimbali, izimpawu zesiShayina kanye newebhu le-spider kuya kuphazi lwamagama namagama wezingane zakhe.
Djibril Cisse umdwebo Djibril Cisse une-attachment udumo. Akalokothi alinde ukunakwa okubandakanya ukubonisa umzimba wakhe.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Thumela umhlalaphansi
Lo mFulentshi, owashona umhlalaphansi ku-2015 kamuva wanquma ukwenza u-U-uvule isinqumo sakhe somhlalaphansi. Ngemva kokulenga izikhumba zakhe ekugcineni, uCisse waqala ukugxila ekwakheni umsebenzi ku-DJ, umculo, ukudansa kanye nemfashini.
Muva nje, u-Cisse usanda kumisa othandwayo Ukudansa Ngezinkanyezi eFrance, eyaziwa nangokuthi Qondani Woza Ukudansa. Wayengowenkanyezi yokuqala yeduna ezokwaziswa ngesizini sesithupha, ngokusho Mirror.
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Nkosi weManor
Ngo-2005, ngemuva kokuthuthela eLiverpool, i-Djibril Cissé ithengile indlu edolobheni laseFrodsham, eKhershire, futhi yenza kanjalo waba iNkosi yeManor of Frodsham. Ngokushesha ngemva kokuthenga indlu, isinqumo sakhe sokunqabela i-Cheshire Forest Hunt imvume yokuzingela ezweni lakhe yathola ukufakwa kwezindaba ezinkulu.
Abantu baseCisse abathukuthele ngokuvinjelwa noma yisiphi isenzo sokuzingela kusukela egibele ngaphesheya kwamahektha ayisishiyagalolunye; "Angikhathaleli ukuthi bacabangani ngami - ngingumthandi wezilwane," utshele iphephandaba iThe Guardian Sports.
Emva kokuthenga izindlu zezindlu uCisse uzuze njengegama elithi Lord of the Manor of Frodsham, okusho ukuthi uJuda waba "Nkosikazi".
I-Djibril Cisse Childhood Story Plus I-Untold Biography Imininingwane -Ababoshwe
Ngo-Okthoba 2015, uCissé wayengomunye wabantu abane ababoshiwe eFrance ngenhloso yokuzama ukumangalela i-footballer emhlabeni wonke.
Ukuboshwa kwavela ngenxa yokuthi uxhumano lwakhe olusolwa ngokuya ocansini lwe-tape olubandakanya omunye umdlali Mathieu Valbuena, kodwa wakhululwa ngaphandle kwecala. UCisse noValbuena bebelokhu bekanye nabo eqenjini lezwe laseFrance kanye nasezingeni leqembu leMarseilles phakathi kwe-2007 ne-2009. Emkhakheni ofanayo, I-Karim Benzema, enye inkanyezi yebhola lezinyawo, naye waboshwa ngokuphathelene necala elifanayo lokuhlukunyezwa ngokocansi.
UCisse uphika noma yiziphi izinsolo, "Anginakho lutho ngalokhu, Mathieu ungumngane wami," ngokuvumelana ne France 24. Umshushisi waseFrance uthi uCisse uphenywe ngoba wayebazi abanye abahilelekile kulesi sakhiwo kodwa wayengacatshangwa ukuthi ungomunye wabantu abamnyama. UCisse noBenzema basinda kancane iminyaka emithathu.
Akucaci ukuthi ngabe i-tape embuzweni empeleni ikhona nokuthi ubani ovela kuyividiyo kodwa The Daily Mail kubika ukuthi kuthiwa uhlanganisa u-Valbuena nentombazane ehlanganyela ezenzweni.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Djibril Cisse Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
I-Cote d'Ivoire i-Football Diary
AmaBrendan Rodgers Ingane Yendaba Yobuntwana ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Lucas Digne Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
Amaqiniso weClement Lenglet Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Kurt Zouma Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Wissam Ben Yedder Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
Amaqiniso we-Quique Setien Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
James Milner Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
Tiemoue Bakayoko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Cheick Tiote Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
Salomon Kalou Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts